नायिका गरिमा पन्तको आज जन्मदिन, कति वर्ष लागिन् त ? - Nepal Insider
Home/मनोरंजन/नायिका गरिमा पन्तको आज जन्मदिन, कति वर्ष लागिन् त ?
काठमाडौँ -कुनै समयकी हिट नायिका गरिमा पन्तको आज जन्मदिन हो । गरिमा १९८८ सेप्टेरम्बर १९ तारिखमा लमजुङमा जन्मेकी हुन् । सकै आधारलाई मानेर उनि आफ्नो जन्म दिन्म दिन साथि भाई आफन्त संग मनाउदै छिन् । आज उनि ३२औं बर्ष लागेकी छिन् ।
चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल अभिनेत्री उनि विवाह पछाडि अस्ट्रेलिया बस्दै आएकी छिन् । उनि विवाह गरेपछि चलचित्र क्षेत्रबाट टाढा रहेकी छिन् । उनले हाल सम्म ‘झोला’, ‘तीन घुम्ती’ फूल, ठूली, सम्झना, अर्जुन देव, जीवन मृत्यु, मनले मनलाई मान्छ, सुन्दर मेरो नाम, फूल, भइहाल्छ नि, जस्ता चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । पछिल्लो समय उनि आफ्नो जीवन अस्ट्रेलियामा बिताउदै आएकी छिन् ।
दिव्याले नगर्ने भएपछि ‘लक्का जवान’मा वर्षा सिवाकोटी फाइनल
जिम र कफीको नशामा रमेश
अशोक दर्जीको नयाँ गीत “मन बिनाको” भाग २
एक पटक मनमा आ*त्मह*त्या गर्नेसम्मको साेच आएकाे खुलाइन नम्रताले?